Rahoviana no hanomboka ny sidina mankany Afrika Atsimo? Resadresaka vaovao momba ny fizahantany vao nanomboka
Home » Lahatsoratra farany farany » Fitaterana » Rahoviana no hanomboka ny sidina mankany Afrika Atsimo? Resadresaka vaovao momba ny fizahantany vao nanomboka
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Fitaterana • Vaovao farany momba ny UK
Ny praiminisitra UK Boris Johnson dia niresaka tamin'ny filohan'i Afrika Atsimo Cyril Ramaphosa androany tolakandro.
Niresaka momba ny fanamby ateraky ny variana COVID-19 vaovao eran'izao tontolo izao izy ireo, ary ny fomba hiarahana miatrika izany sy ny fanokafana indray ny dia iraisam-pirenena.
Ny praiminisitra britanika dia nidera ny filaharan'ny genomika haingana ao Afrika Atsimo sy ny fitarihana amin'ny fizarana mangarahara ny angona siantifika.
Nanamafy ny fiaraha-miasa akaiky teo amin'ny firenentsika ireo mpitarika, naseho tamin'ny fiaraha-miasa Just Energy Transition nifanarahana tamin'ny COP26, ary nanaiky ny hifandray akaiky izy ireo rehefa miatrika ny fandrahonana mitohy avy amin'ny areti-mifindra manerantany.
Araka ny filazan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS), ny porofo savaranonando dia manondro ihany koa ny mety hisian'ny areti-mifindra indray miaraka amin'ity karazana ahiahy ity, raha oharina amin'ny karazany hafa, toa an'i Delta.
Amin'izao fotoana izao dia toa mitombo ny isan'ny tranga any amin'ny faritany rehetra any Afrika Atsimo. Manazava ny OMS fa hita haingana kokoa noho ny tamin'ny firongatry ny otrikaretina teo aloha ilay variana, ka nilaza fa “mety hanana tombony amin'ny fitomboana” izy io.
Nangataka ireo firenena ireo manam-pahaizana mba hanatsara ny fanaraha-maso sy ny fizotry ny fizotry ny genome mba hahatakarana bebe kokoa ny variana.
Misy ihany koa ny fandalinana maromaro ary ny vondrona mpanolo-tsaina ara-teknika an'ny masoivoho, fantatra amin'ny fanafohezana TAG-VE, dia hanohy ny fanombanana an'io variana io. OMS dia hampita vaovao hita amin'ny firenena mpikambana sy ny vahoaka raha ilaina izany.
Mbola voafetra ihany ny vaovao
Ny alarobia teo, ny mpitarika ara-teknika an'ny OMS COVID-19, Dr. Maria Van Kerkhove, dia nilaza fa mbola voafetra ihany ny fampahalalana momba ny variana 'Omicron' ankehitriny.
“Miisa 100 latsaka kely ny filaharan'ny génomée rehetra azo alaina, mbola tsy fantatray loatra izany. Ny fantatray dia manana fiovana maro be io variana io, ary ny ahiahy dia rehefa manana fiovana be dia be ianao dia mety hisy fiatraikany amin'ny fihetsiky ny virus", hoy izy nandritra ny Q&A tao amin'ny Twitter.
Nohazavain'ny Dr. Van Kerkhove fa ny mpikaroka amin'izao fotoana izao dia miezaka ny hamantatra ny toerana misy ny fiovan'ny toetr'andro sy ny mety ho dikan'izany ho an'ny diagnostika, fitsaboana ary vaksiny.
"Handany herinandro vitsivitsy isika vao hahalala ny fiantraikan'io variana io, be dia be ny asa atao", hoy izy nanampy.
Talohan'ny androany, ny masoivoho momba ny fahasalamana ao amin'ny Firenena Mikambana dia nanentana ny firenena rehetra mba hanaraka fomba fiasa mifototra amin'ny risika sy siantifika amin'ny fandrarana ny fitsangatsanganana mifandray amin'ilay variana vaovao fantatra any Afrika Atsimo sy Botswana.
Atoa Van Kerkhove dia nisaotra ireo mpikaroka avy amin'ireo firenena ireo tamin'ny fizarana fampahalalana an-karihary tamin'ny masoivoho momba ny fahasalamana ao amin'ny Firenena Mikambana.
"Ny olona rehetra any: aza manavakavaka firenena mizara ampahibemaso ny zavatra hitany", hoy izy namporisika, satria ny firenena toa an'i Grande-Bretagne, Frantsa ary Israely dia nifindra nanafoana ny sidina mivantana avy any Afrika Atsimo sy ny firenena manodidina.
Araka ny filazan'ny manampahefana momba ny fahasalamana any Afrika Atsimo hatreto, dia latsaky ny 100 ny trangan'ilay variana vaovao no voamarina, indrindra amin'ireo tanora manana tahan'ny vaksiny ambany indrindra eto amin'ny firenena.
“Ny firenena dia afaka manao zavatra betsaka sahady amin'ny lafiny fanaraha-maso sy filaharana ary miara-miasa amin'ireo firenena voakasik'izany na maneran-tany sy ara-tsiansa mba hiadiana amin'ity variana ity sy hahatakatra bebe kokoa momba izany mba hahafantarantsika ny fomba handehanana… fampitandremana”, hoy ny mpitondra tenin'ny OMS Christian Lindmeier tamin'ny mpanao gazety tany Genève.
Arovy ny tenanao sy ny hafa
Nampahatsiahy ny torohevitra teo aloha ny tompon'andraikitra ao amin'ny OMS: afaka manao zavatra betsaka ny olona mba hiarovana ny tenany amin'ny COVID, ao anatin'izany ny fanohizana ny fanaovana saron-tava sy ny fisorohana ny vahoaka.
"Ny olona rehetra any ivelany dia mila mahatakatra fa arakaraka ny fiparitahan'ity virus ity no ahafahan'ny otrikaretina hiova bebe kokoa, ny fiovana bebe kokoa ho hitantsika", hoy ny Dr. Van Kerkhove.
"Manaova vaksiny rehefa azonao atao, ataovy azo antoka fa mahazo ny fatranao feno ianao ary ataovy izay hahazoanao fepetra hampihenana ny fiparitahanao ary hisorohana ny tenanao tsy hampita izany virus izany amin'ny olon-kafa", hoy izy nanampy.